बिल्ट-इन बाथटबहरू, तपाईंको बाथरूमको लागि राम्रो समाधान | बेजिया
के तपाइँसँग सानो बाथरूम वा जटिल बिरुवा छ? तपाईले बजारमा फेला पार्नुहुने बाथटबहरू मध्ये कुनै पनि तपाईलाई विश्वास गर्दैन? यी कारणहरू हुन् जसले तपाईंलाई बाथरूममा बाथटब राख्न छोड्नु हुँदैन। निर्मित बाथटबहरू तिनीहरू एक उत्कृष्ट समाधान हुन् जसले तपाईंलाई ठाउँको अधिकतम बनाउनको लागि मात्र अनुमति दिँदैन, तर तपाईंलाई उपयुक्त बनाउन यसलाई अनुकूलित पनि गर्दछ।
बिल्ट-इन बाथटबको लागि छनौट गर्नु हामीले नुहाउनको लागि उपयुक्त ठाउँको साथ बाथरूम प्रदान गर्ने धेरै विकल्पहरू मध्ये एक हो। यस विकल्पको फाइदाहरू, साथै, धेरै छन्। र त्यो हो तपाईं यसलाई कसरी चाहनुहुन्छ चयन गर्न सक्नुहुन्छ: वर्ग वा आयताकार? पालिस कंक्रीट वा सिरेमिक कोटिंग संग?
1 बिल्ट-इन बाथटबका फाइदाहरू
2 आधुनिक बाथरूमको लागि सामग्री
बिल्ट-इन बाथटबका फाइदाहरू
बिल्ट-इन बाथटबहरूले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ यो वस्तु अनुकूलन गर्नुहोस् तपाईंको बाथरूमको विशेषताहरूमा। र यो तिनीहरूको डिजाइन वा वास्तुकलाको कारण साना वा कठिन बाथरूमहरूमा शर्त लगाउन पर्याप्त महत्त्वपूर्ण कारण हो। यसलाई अनुकूलन गर्ने सम्भावना यस प्रकारको बाथटबको फाइदाहरू मध्ये एक हो, तर त्यहाँ थप छ!
तिनीहरू बाथटब प्रदान गर्नको लागि आदर्श समाधान हुन् कठिन सुविधाहरू संग बाथरूम किनभने तिनीहरू मापन गर्न बनाइएका छन्।
अनुकूलन गरेर तपाईं सक्नुहुन्छ आकार, आकार र उचाइ छान्नुहोस् बाथटबलाई तपाइँको बाथरूम र तपाइँको परिवारको लागि सबै भन्दा राम्रो तरिकामा अनुकूलन गर्न। एक क्लासिक आयताकार बाथटब देखि, एक वर्ग एक वा कुना एक, किन छैन?
तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ सामग्री छान्नुहोस् बाथटबको बाहिरी र भित्री भागका लागि, यसरी तपाईंले खोज्नु भएको सौन्दर्यशास्त्र वा शैलीमा अनुकूलन गर्नुहोस्।
तिनीहरूले तपाईंलाई बाथरूमको कोटिंग एकताबद्ध गर्न अनुमति दिनेछन्। तपाईंले भुइँ वा भित्ताहरूमा प्रयोग गर्नुभएको समान कोटिंगले बाथटबलाई छोप्न सक्नुहुन्छ, यसरी स्पा जस्तो आधुनिक र सफा ठाउँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
ताकि आर्द्रता वा चुहावटको समस्याका कारण यी फाइदाहरू भविष्यमा धमिलो नहोस्, तपाईंले गर्नुपर्छ यसको कार्यान्वयनको लागि एक पेशेवरलाई सुम्पनुहोस्। तिनीहरूबाट बच्नको लागि राम्रो वाटरप्रूफिंग आवश्यक छ, त्यसैले सन्दर्भको साथ कम्पनी वा पेशेवरलाई काम सोध्नुहोस् र अर्डर गर्नुहोस्।
आधुनिक बाथरूमको लागि सामग्री
मार्बल, सिरेमिक, माइक्रोसेमेन्ट, पालिश कंक्रीट, आर्द्रताको उच्च प्रतिरोधका साथ प्राविधिक पेन्टहरू... यी दुवै निर्मित बाथटबहरू र भुइँ र भित्ताहरू ढाक्नका लागि आज सबैभन्दा बढी माग भएका सामग्रीहरू हुन्। समकालीन र आधुनिक बाथरूम आज हामीले प्रस्ताव गरेको जस्तै।
तर उल्लेख गरिएका सबैको एउटै भूमिका छ भनी हामी भन्न सक्दैनौं। त्यहाँ दुईवटा छन् जुन बाँकीबाट अलग छन् र तपाईंले सायद तस्बिरहरूबाट पहिले नै अनुमान गर्नुभएको छ। ठ्याक्कै! ती मध्ये एक हो माइक्रोसमेन्ट, जसको साथ भुइँ पनि सामान्यतया कभर हुन्छ, यसरी दुबै देहाती र समकालीन बाथरूमहरूमा निरन्तर सतह प्राप्त गर्दछ।
र जस्तै लोकप्रिय माइक्रोसमेन्ट एक निर्मित बाथटब संग यी बाथरूम ड्रेस गर्न सिरेमिक सामग्री हुन्। यी दुबै पर्खाल र भुइँहरूमा साथै सिंक काउन्टरटपहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसरी हामीले पहिले कुरा गरिरहेको स्पा भावना प्राप्त गर्न सकिन्छ। ठूला ढाँचाहरूमा र खैरो टोनहरूमा टाइलहरू सबैभन्दा बढी माग गरिएका छन् तर निस्सन्देह, तिनीहरू बजारमा मात्र विकल्पहरू छैनन्।
यदि हामी बिल्ट-इन बाथटबहरू र बाथरूम कभरिंगहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने, प्रचलनहरूको बारेमा पनि कुरा गरौं। कोटिंग्स एकताबद्ध गर्नुहोस् बाथरूम को आज एक प्रवृत्ति छ। हो, यो संयोग होइन कि आज हामीलाई प्रेरणा दिने अधिकांश तस्बिरहरूले त्यो न्यूनतम र सफा सौन्दर्य प्राप्त गर्दछ जसले तिनीहरूलाई एक अद्वितीय कोटिंग दिन्छ। एक सौन्दर्य हो जसले तपाईंलाई आराम गर्न निम्तो दिन्छ र हामीले नुहाउँदा हामी त्यही चाहँदैनौं?
निस्सन्देह सबैले यो प्रवृत्ति मन पराउँदैनन् र यसलाई अनुकूलन गर्न इच्छुक छैनन्। यदि तपाइँ त्यो विचारमा हुनुहुन्छ भने, तपाइँ निर्मित बाथटब र भित्ता वा भुइँमा समान कोटिंग प्रयोग गर्न, अन्य सिरेमिक सामग्रीहरूमा शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ वा विरोधाभासहरू सिर्जना गर्न काठ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » फर्नीचर » बिल्ट-इन बाथटबहरू, तपाईंको बाथरूमको लागि राम्रो समाधान
बच्चाहरु र किशोरहरु मा अवसाद